एक वर्षभित्र युएईमा ६४ नेपालीले ज्यान गुमाए
दुबई, पुस ८ (सेतोपाटी) print
वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली रोजगारदाताहरुलाई खाडी मुलुकहरुमध्ये युएई एउटा राम्रो गन्तव्यको थलो बन्दै गएको छ । युएईमा प्रवेश पाउनका लागि मुख्य रुपमा ४ प्रकारका भिसाको सुविधा रहेको छ । जसमा ईम्प्लोमेन्ट भिसा, भिजिट भिसा, टुरिष्ट भिसा र ट्राजिट भिसा हो । तर, केही वर्ष यता भने भिजिट भिसामा आई आफ्नो योग्यता र दक्षता अनुसारको कामप्रति लाग्नेहरुको संख्या बड्दो देखिन्छ । ईम्प्लोमेन्ट भिसाको तुलनामा भिजिट भिसा सरल र सहज तरिकाले पाउने भएकाले भिजिट भिसाको नै धेरै प्रयोग भएको हुन्छ ।
आफ्नो घर परिवारलाई हर प्रकारका सुख, शान्ति र सुविधा होस् भन्ने कस्को चाहना हुदैन र ? नेपाली राजदूतावास अबुधावीका द्धितीय सचिव तथा सूचना अधिकारी कृष्ण अर्यालले दिएको जानकारी अनुसार १ जनवरी २०१६ देखि आज मिति २३ डिसेम्बर २०१६ यानी कि एक बर्षको अवधिमा ६४ जना नेपालीहरुले ज्यान गुमाएका छन्।
त्यसमध्ये पुरुष ५९ जना रहेको छ भने महिला ५ जना रहेका छन् । खासगरी मृत्यु हुने कारण नं. १ मा प्राकतिक, नं. २ मा सडक दुर्घटना र नं. ३ मा आत्महत्या देखाएको छ । विगतका तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सन् २०१३ मा ७० जना, २०१४ मा ६३ जना र २०१५ मा ६४ जना पुगेको छ।
युएईस्थित नेपालीहरुको जनसंख्या आम–जनमानसको अनुमानमा ३ लाखभन्दा बढी रहेता पनि युएईका परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार २ लाख ४ हजार १ सय ६ जनाएको छ।
सरकारी विभागदेखि लिएर हर क्षेत्रमा नेपाली कामदारहरु कार्यरत छन् । उच्च श्रेणीमाभन्दा मध्यम श्रेणीमा धेरै कार्यरत पाईन्छ । विदेशमा रोजगारी गर्न जाँदा नेपालबाट केही सीप र ज्ञान हासिल गरी गएमा उपयुक्त लाग्ने थियो। यस्ता खालका सहयोग गर्नका लागि नेपालस्थित १० म्यानपावरलाई समेत आधिकारिक मान्यता दिएका छन् ।
पछिल्लो समयमा युएईस्थित नेपाली व्यवसायीहरु पनि फस्टाउदै गएको पाईन्छ । धेरै बर्षदेखि रोजगारीमा संग्लन रहेका पनि अब भने व्यवसाय क्षेत्रमा पूर्ण रुपले हानिएका छन् । व्यवसायमा कपडा पसल, किराना पसल, सुन चांदी पसल, सुपर मार्केट, ट्राभल्स एण्ड टुरिजम, टेलर्स, इलेट्रानिक पसल, लाण्ड्री, क्लिनिङ एण्ड मेन्टनेस, व्यूटीपार्लर र रेष्टुरेण्ट हुन् । अन्य व्यवसायभन्दा रेष्टुरेण्ट व्यवसाय मौलाउदै गएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष ८, २०७३ ०७:५८:२६
हिमालय एअरलाईन्सको दुबईमा थाल्यो सिधा उडान, दुई तर्फी भाडा २८ हजार!
भिजिट भिसामा दलालहरुले दुवई ल्याएर अलपत्र पारेकाहरू
मानव तस्करीमा संलग्न दलाल विरुद्ध युएई दूतावास सक्रिय, मुद्दा चलाउन सिफारिस
'युएई'मा भएको सडक दुर्घटनामा एक नेपालीको निधन